အလုပ်မ၀င်မီ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည် - intouchmedicare
အလုပ်မ၀င်ခင်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းသည် ကုမ္ပဏီနှင့်အလုပ်လျှောက်သောအလုပ်လုပ်သူအတွက်လုပ်သင့်သောအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် အထူးသဖြင့်အလုပ်၀န်ထမ်းများသောကုမ္ပဏီသို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီမှသတ်မှတ်ထားသောအတိုင်းအလုပ်မ၀င်ခင်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရန်လိုအပ််နေခြင်း ဆေးခန်းသည်လုံခြုံစွာဆရာ၀န်နှင့်ဆရာမများ ကုသစစ်ဆေးန်ဆောင်မှုပေးရန်အဆင်သင့်ရှိပါသည်။ အဆင့်အတန်းရှိသောစက်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် လုံခြုံစွာအဆင်ပြေပြီး လျှင်မြန်စေသည်။ အလုပ်မ၀င်ခင်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးဖို့ဆေးခန်းကိုရှာဖွေနေသူများအတွက် အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်းသည် သင်ကိုအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားပေးပါသည်၊၊
ကျန်းမာရေးကို၀င်မစစ်ဆေးခင် ဆေးခန်းသည်ပထမဦးဆုံးစဉ်းစားရန်မှာကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုပရိုဂရမ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားသောအလုပ်နှင့်သင့်လျော်အောင် သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီကသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းသင့်လျော်အောင် အတွက်ဖြစ်ပါသည်၊၊အလုပ်မ၀င်ခင်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုကိုသင့်အတွက်ရွေးချယ်ရန် ၂ မျိုးရှိပါသည်။၎င်းသည်-
သာမန်ပရိုဂရမ် : ဒါဟာအလုပ်အကိုင်ထဲသို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သောအရာ အများပါ၀င်သောစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါသည် ၊အထွေထွေအလုပ်အကိုင်တွင်အလုပ်လုပ်သောသူအတွက်သင့်တော်ပါသည်၊၊
အဖွဲ့လိုက်ပရိုဂရမ် : သင့်အတွက်ရွေးချယ်ရန် အုပ်စု ၃ ခုရှိပါသည်
အဖွဲ့ ၁ အလုပ်ရုံအလုပ်လုပ်သူ၊ စင်ထော်ပလာစာအလုပ်လုပ်သူ၊ PC၊ Cashier
အဖွဲ့ ၂ စားသောက်ဆိုင်အလုပ်လုပ်သူ၊ စဖိုမူး၊ စားပွဲထိုး
အဖွဲ့ ၃ ဟိုတယ် resort အလုပ်လုပ်သူ
အဖွဲ့ ၄ Office အလုပ်လုပ်သူ
2. အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်း၌ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရန်မလာခင်ပြင်ဆင်ချက်များ
ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းပရိုဂရမ်ရွေးရပြီးနောက် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရန်ပြင်ဆင်ချက်များသည် အစာနှင့်ရေများကိုစောင်ရန်မလိုအပ်ပါ ဒါပေမဲ့အိပ်ရေးကိုအ၀အိပ်ထားသင့်ပါသည် သင်၏ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သန်မာသောအ‌ဖြေရဖို့အတွက်ဘဲဖြစ်ပါသည်၊ သွေးစစ်ဖို့ရန် နှင့် X-ray အဆုတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ဖို့ရန် အဆင်ပြေသောရှပ်အကျီကို၀တ်လာပေးသင့်ပါသည် ၊ အကယ်၍သင်သည်ကိုယ်၀န်ရှိနေပါက ဆေးခန်း၌ဆရာမများကိုကြိုပြောကြားထားသင့်ပါသည် ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတေ့ာ တခုခုကိုစစ်ဆေးရန်အတွက်က သေချာသတိထားပြီးဂရုစိုက်ရပါသည် ၊ သင့်မှာအဆုတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ထားသောပုံ အဟောင်းရှိခဲ့လျှင်ယူဆောင်လာဖို့ရန်လိုအပ်ပါသည်။
အလုပ်မ၀င်ခင်ကျန်းမာရေးလာစစ်ဆေးသောရက်သည် ပထမဉီးဆုံးလုပ်ရသောအချက်ဟာ သင်၏အကြောင်းအရာအသေးစိတ်စာရင်းကိုလုပ်ရပါမည် ဉပမာအားဖြင့် သင်၏အလုပ်အကိုင်၊ နကိုရောဂါလက္ခဏာ၊ အမြဲတမ်းသုံးသောဆေး စသည့် အဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း သွေးခုန်နှုန်း signal ကိုတိုင်းတာခြင်း မျက်စိတုံ့ပြန်မှုကိုကြည့်ခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်ကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ အဆုတ်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာခြင်း မည်သည့်မူမမှန်စစ်ဆေးခြင်း (အကယ်၍ သင့်တွင်ဤအရာကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိပါကဆရာဝန်နှင့်ထပ်ပြီးပြောကြားနိုင်သည်) ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည်အလုပ်မစတင်မီသင့်အားကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်ရန်ကူညီရန်ဗဟုသုတနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလမ်းညွှန်ချက်များကိုပေးလိမ့်မည်။
4. Med Refer မှတဆင့် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပြီးသောအဖြေရယူခြင်း
အလုပ်လုပ်သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရန်Med Refer ဟုခေါ်သော အွန်လိုင်းမှတဆင့် စာရင်းပေးထားနိုင်ပါသည်။ သူတို့၏ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးသောအဖြေကိုMed Refer ထဲ၌မှန်ကန်ကြောင်းစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။၎င်းသည်လျှင်မြန်ပြီးလွယ်ကူစေနိုင်ပါသည် သင်၏အချိန်ဖြုန်းတီးမှုကိုလျော့နည်းစေပါသည် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးသောသူလဲ ဆေးခန်းကနေပြီး သင်၏ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးသောအဖြေကိုလျှင်မြန်စွာရယူနိုင်ပါသည်။
အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်းသည် အလုပ်မ၀င်ခင်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးထဲ၌ ၀န်ထမ်းများနှင့်ကုမ္ပဏီများထံယုံကြည်မှုများကိုရရှိပါသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်းသည်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးသောပရိုဂရမ်များကိုဆရာ၀န်အားဖြင့်နှင့်ကျွမ်းကျင်သောဆရာမများအားဖြင့် ကိုယ်တိုင်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးသောပရိုဂရမ်များကိုဒီဇိုင်းထုတ်ပါသည်။ ခေတ်မီသော စက်ပစ္စည်းစက်ကိရိယာနှင့်အသုံးပြုပြီး အဆင်ပြေပြီးလွယ်ကူစေနိုင်ပါသည်။ စစ်ဆးသောအဖြေကိုသေချာပြီးမှန်ကန်စေရန်အတွက်လဲဖြစ်ပါသည်။ သင့်ကိုသက်သေပြရန်ဆရာ၀န်ဆေးလက်မှတ်စာရွက်စာတမ်းများကိုလဲထုတ်ပေးပါသည်။သို့သော် စိတ်၀င်စားနေသူအတွက်အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်း၏ဌာနတိုင်း အသေးစိတ်များကိုစုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။